आज यूके पाउण्ड बाहेक सबै देशको भाउ घट्यो, कुन देशको कति ? – Khabar Silo
काठमाडौं। आज (शुक्रबार) यूके पाउण्ड बाहेक प्राय सबै देशको भाउ ओरालो लागेको छ ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रिदर १४६ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ १७ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य देशको विनिमयदर
काठमाडौं- नेपाली बजारमा मंगलबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुन प्रतितोला ६ सय रूपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा ९६ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य मंगलबार तोलामा ९७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९७ […]
आज पनि भारी मात्रमा बढ्यो सुनको भाउ, पछिल्लो १ महिना यताकै महँगो !
काठमाडौँ – नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि बढेको छ । बुधबारको तुलनामा ९०० रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य आज पनि बढेको हो।नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपाली बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैंयाँले बढेको छ। जससँगै छापावाला सुनको मूल्य ८७ हजार ४ सय कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि […]
काठमाडौं । आज साताको छैटौँ दिन शुक्रबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ । बुधबार एक सय रुपैयाँ घटेको सुनको भाउ बिहीबार र शुक्रबार स्थिर रहेको हो। आज छापावाल सुन प्रतितोला ७० हजार ६ सय तथा तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज सुनको भाउ स्थिर […]